Inona no sandan'ny haraton'i Colin Jost? Mikarokaroka ny fananan'ny vadin'i Scarlett Johansson - Pop-Kolontsaina
Inona no sandan'ny haraton'i Colin Jost? Mikarokaroka ny fananan'ny vadin'i Scarlett Johansson
Ny vadin'i Scarlett Johansson, Colin Jost, dia nanamafy fa miandry ny zanak'izy ireo voalohany ny vadiny, ary ho lasa ray izy tsy ho ela. Nanao ny fanambarana izy nandritra ny fampisehoana nataony tamina gig gig-up tao amin'ny Ridgefield Playhouse any Connecticut.
Pejy fahenina dia nanambara tamin'ny volana jolay fa bevohoka ilay mpilalao sarimihetsika. Izy dia efa renin'i Rose enin-taona avy amin'ny fanambadiany taloha tamin'i Romain Dauriac frantsay. Scarlett sy Colin dia namatotra ny fatotra tamin'ny volana oktobra 2020 rehefa niaraka nandritra ny telo taona.
Fanampiny vaovao! Scarlett Johansson sy Colin Jost dia manantena ny hiaraka amin'ny zanany voalohany. https://t.co/NJMV50C6YY
- Us Weekly (@usweekly) 17 aogositra 2021
ny Lucy mpilalao sarimihetsika dia niteraka tsaho momba ny fitondrana vohoka tamin'ny volana jona taorian'ny nandisoany ny ankamaroan'ireo Mpitondratena mainty zava-nitranga. Loharanom-baovao iray tamin'ny pejy fahenina nilaza tamin'izany fotoana izany:
Mbola tsy nanao dinidinika na hetsika marobe izy mba hampiroboroboana ny 'Black Widow', izay mahagaga satria famoahana Marvel / Disney goavambe, ary sady izy no kintana ary mpamokatra mpanatanteraka.
Ny 36 taona dia niseho fampiroboroboana tao amin'ny Zoom ary saika tao amin'ny The Tonight Show hiresahana amin'i Jimmy Fallon tamin'io volana io.
Scarlett Johansson nitory an'i Disney andro vitsy lasa izay tamina hetsika lehibe sy nampiady hevitra, nanambara fa nivadika ny fifanarahana nifanaovany rehefa navotsotra tao amin'ny Disney + i Black Widow.
Ny sandan'ny Colin Jost
Colin Jost miaraka amin'i Michael Che ao amin'ny SNL (Sary avy amin'ny BostonGlobe / Twitter)
Colin Jost dia mpanao hatsikana, mpilalao ary mpanoratra malaza. Nanana andraikitra maro mifandraika amin'ny hatsikana izy ary namoaka memoir, Tava tena azo totofana: Memoir , amin'ny taona 2020.
Raha ny lazain'ny Celebrity Net Worth dia 8 tapitrisa dolara ny vola azon'ny zazalahy 39 taona. Amin'ny maha mpikambana mpikambana sy mpanoratra an'i Saturday Night Live , mandray karama $ 25000 isaky ny fizarana. Raha heverina fa miseho amin'ny fizarana 21 mandritra ny taona izy dia mahazo $ 525,000 isaky ny vanim-potoana fampisehoana.
Teraka tamin'ny 29 Jona 1982, Colin Jost dia nihalehibe tany New York City. Nandritra ny nanatrehany ny lisea Regis High School tao Manhattan dia izy koa no tonian-dahatsoratry ny gazety an-tsekoly, The Owl.
Ilay mpanao hatsikana dia niditra ho mpitati-baovao sy tonian-dahatsoratra tao amin'ny Staten Island Advance. Nandefa fonosana fanoratana izy avy eo tany amin'ny Saturday Night Live izay nahazoany toerana manoratra tamin'ny 2005.
Jost no mpanara-maso ny fandaharana ny taona 2009 ka hatramin'ny 2012 ary ny mpanoratra mpiara-lohan'ny taona 2012 ka hatramin'ny 2015.
Colin Jost sy Scarlett Johansson dia nihaona tamin'ny setin'ny Saturday Night Live tamin'ny 2006, ary nanomboka fifandraisana izy ireo tamin'ny taona 2017. Nifamofo tamin'ny taona 2019 izy ireo ary nanambady tamin'ny 2020.
Vakio ihany koa: Kanto loatra: Jereo voalohany an'i Dominic West toa an'i Prince Charles ao amin'ny The Crown izay manasa fanehoan-kevitra mahatsikaiky an-tserasera
afaka mitia olona be ve ianao ka maharary
dia ny vadiko no feno fitiavan-tena na ny ahy
manome tsiny ahy noho ny olan'ny fifandraisanay izy
ny fomba hahitana ny talentanao
Rahoviana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i john cena
raiso indray mandeha isan'andro ny zavatra
tsy tiako ny namako